Tapitra izany ny fanehoam-pitiavan-tanindrazana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Telo karazana no indray marihana rehefa migadona ny 26 jiona isan-taona fa tsy tamin’ity taona 2015 ity ihany akory. Eo ny fetim-pirenena, eo ny fetin’ny foloalindahy ary eo ny fanamarihana ny fiverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara. Hangatahana hanangana sainam-pirenena ny isan-tokantrano rehefa manakaiky ny 26 jiona. Ho fanehoana ny fitiavan-tanindrazana no hanaovana ny fandrisihana. Misy milaza fa didina mihitsy ny isan-tokantrano fa tsy mbola re kosa hatreto fa nisy ny voasazy fa tsy nanangan-tsaina. Mariky ny fiandrianam-pirenena ny fananan’ny firenena iray saina ho azy. Rehefa misy ny ady hifanandrianan’ny firenena iray amin’ny firenena hafa dia io saina io no ahitana fa resy na mandresy ny mpifanandrina. Ny resy dia mampiakatra saina fotsy na koa avy hatrany dia esorin’ny mpandresy ny saina. Tapitra ny 26 jiona manomboka tazana fa manala ny saina ny mpiara-monina. Ny voalohany amin’ireo nampirina ny saina dia ireo mpivaro-mandeha mamarotra ny sainam-pirenena.
Resy ve ilay fitiavan-tanindrazana ? Inoana fa tsy izay loatra no mahatonga ireo mpiara-monina hanala ny saina fa tapitra ny fotoana manokana nankalazana ny fetim-pirenena ka mendrika raha ampirimina amin’izay ny saina.
Soritana tokoa fa amin’ny vanim-potoana manokana hafa dia mampiakatra io saina io ny teratany Malagasy. Ohatra rehefa misy fifaninanana iraisam-pirenena. Ohatra koa rehefa tafakatra amin’ny fara-tampony ny trano ahorina iray dia manatsatoka saina eny ambony eny ny tompon’ny trano aorina. Ary dia mitondra saina koa ny fianakaviana rehefa misy ny vanim-potoana manan-danja eo amin’ny fiainana tahaka ny famoran-jaza izany na koa ny famadihana na fandevenana ka enti-mandeha ny razana. Mitory ireo fa tsy ny 26 jiona ihany no hanofahofana ny sainam-pirenena ary fotoana hanehoana ny fitiavana ny Tanindazana. Milaza koa ireo ohatra ireo fa tsy natao ho an’ny foloalindahy na tranom-panjakana ihany no mendrika an’io sainam-pirenena io.
Isan’ny mahatonga ny filazana etoana fa tapitra ny fanehoana fitiavan-tanindrazana dia ny zava-misy. Vao nifarana ny fety dia nosamborina ny mpitarika ny girevin’ireo mpiasan’ny Air Mad. Tsy nisy kiandrasoandraso. Andro asabotsy dia avy hatrany dia notanana tao amin’ny polisy. Ireo nahavita heloka bevava no iharan’izany fomba fiasa izany. Manamarin-tena ny mpitondra Fanjakana milaza fa fiarovana ny fananam-pirenena no nahatonga azy nitory ny mpitarika girevy. Kanefa…
Fa talohan’izany koa anefa ireo depiote, solombavambahoaka no fiantso azy, dia nampiseho fa manana ny alahelony amin’ny filoham-pirenena ka tsy nanaja ny fanasana nalefan’ity farany hiara-hankalaza ny fetim-pirenena. Tsy nisy izany ilay fitsaharana satria tonga ny fety. Gidragidra lava na dia nisafidy ny fihavanana ho teny faneva hanamarihana ny fankalazana ny faha-55 taonan’ny fetim-pirenena aza ny mpikarakara ity 26 jiona 2015 ity.
Nifarana koa ny iray volan’ny teny malagasy. Afaka miteny amin’ny fiteny tsy azy intsony mandritra ny 11 volana ny teratany malagasy. Tsaroako eto ny reko teny amin’ny faritra iva : “Tsy avelan’i Mamanay hi-kiraosy izahay radem”. Raha hazavaina amin’ny fiteny gasigasy kokoa dia hoe tsy avelan’i Neny hihazakazaka izahay rahampitso. Eny amin’ny toerana noheverina fa mampiasa kokoa ny teny malagasy no nandrenesana an’izany.
Endrika samy hafa ireo hilazana fa tapitra ny fanehoam-pitiavan-tanindrazana. Tsy ny fankalazana ny 26 jiona ihany no tokony hanamarihana sy hanehoana izany fitiavan-tanindrazana izany. Eo koa ny fahaizan’ny samy Malagasy dia ny olona mpitondra sy ny olona entina ary ny samy mpiara-monina maneho ny fifankatiavana. Rehefa tsy hanao izany dia mazava loatra fa ny vahiny goaibe sy ny mpitsentsitra no hifaly sy handromba izay haren’ity firenena ity ary rehefa any izany dia hanorim-ponenana any an-kafa indray izy ireny. Izay ve no tadiavin’ny Malagasy ? Tandremo sao misy fitiavan-tanindrazana diso fiantefa àry.
Tsy ritra ny Fitiavana. Mahereza hatrany.